Maxaa Ka socda magaaladda dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboledka Galmudug – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay ku hoyday Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud,halkaas oo uu garay gabaldhicii xalay,waxaana la sheegay in halkaasi u ka wado kulamo kala duwan.
Wararka ay Idaacadda Risaala ee Magalada Muqdisho ay heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay Ra’iisul Wasaare Kheyre uu kulamo gooni gooni ah la qaatay Madaxdii Ahlusunna ee ku biiray Maamulka Galmudug,isaga oo kala hadlayay sidii loo dhisi lahaa Galmudug mideysan.
U jeedada uu Ra’iisul Wasaare Kheyre uu u tegay Magalada Dhuusamareeb ayaa waxaa qeyb ka aheyd qancinta hoggaanka Ahlusunna uu saluug badan ka muujiyay howlaha ay dowladda ka wado Magalada dhuusamareeb iyo furitaanka Shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaannada Galmudug.
Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga oo iyana maalmahaan ku sugnaa Magalada Dhuusamareeb ayaa dhankooda waxaa ay wadaan kulamo iyo dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu dhameystiro qorashaha Amniga Magalada & furitaanka Shirka oo ay haatan ku sugan yihiin wufuud kala duwan.
Amniga Magalada Dhuusamareb ayaa aad loo adkeeyay,waxaana halkaasi ku wada sugan Ciidamada dowladda Soomaaliya oo isugu jira,Millateri, Boolis, iyo Nabadsugid iyo sidoo kale Ciidamo ka tirsan AMIOSM oo ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya,kuwaas oo amniga siweyn xaqiijinaya.